स्मरणशक्ति बढाउने हो ? यस्ता छन् सरल उपाय – जीवनशैली
स्मरणशक्ति बढाउने हो ? यस्ता छन् सरल उपाय
Home /समाचार/स्मरणशक्ति बढाउने हो ? यस्ता छन् सरल उपाय
एजेन्सी । मानव मस्तिष्क एक जटिल संरचना हो । मानिसलाई लाग्न सक्छ कि मस्तिष्कलाई कुनै पनि कृत्रिम गतिविधिबाट प्रभाव पार्न सकिँदैन । तर, त्यस्तो होइन ।
विभिन्न अनुसन्धानले भनेका छन्, त्यस्ता थुप्रै कृत्रिम गतिविधि छन्, जसले मस्तिष्कको न्युरोन्स बनाउन सक्छ । यस्ता गतिविधि र खाद्यपदार्थले स्मरणशक्ति वृद्धि गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ ।
बायाँ हातको प्रयोगले मस्तिष्कको तन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै नयाँ न्युरोन्स पनि बन्छ । जसरी व्यायाम गर्दा शरीरमा स्फूर्ति आउने गर्छ, त्यसरी नै तुलनात्मक रूपमा कम सञ्चालन हुने बायाँ हातको कामले मस्तिष्कलाई ऊर्जावान् बनाउँछ ।
अध्ययनले देखाएको छ कि जब तपाईं बढी प्रयोग हुनेभन्दा अर्को हातले काम गर्नुहुन्छ, त्यतिवेला पूरै मस्तिष्कले एकसाथ काम गर्छ । मस्तिष्कको बायाँ गोलाद्र्ध दायाँ हात र दायाँ गोलाद्र्ध बायाँ हातसँग जोडिएको हुन्छ ।
पानी पिउँदा पनि मस्तिष्कको बाढोत्तरी हुन्छ । पानीबाट तृप्त मानिसको मस्तिष्कले १४ प्रतिशत बढी काम गर्छ । यदि तपाईं कुनै जरुरी काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ या परीक्षामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने पानी पिएर मात्र घरबाट निस्कनुस् ।
जर्नल अफ पोषण रिसर्चका अनुसार निर्जलीकरण हुँदा शरीरले मस्तिष्कबाट पानीको आपूर्ति गर्छ । मस्तिष्क जीवित रहनका लागि पनि पानी अत्यावश्यक हुन्छ ।
सशस्त्रका ६५ सईको इन्सपेक्टरमा बढुवा, को को परे हेर्नुहोस् सूची
वैदेशिक रोजगार छोडेर कुखुरापालन व्यवसायमा रमाउँदै युवा